ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ကတ္တရာစက်ရုံအိတ် filter ကိုဆုံလည် China Manufacturer
ကတ္တရာသုံးစက်ရုံအတွက် Deduster,ကတ္တရာစေး Bag Filter ကို,နောက်ကျောအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေညင်းတိုက်ခတ်ခြင်း
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ကတ္တရာသုံးစက်ရုံအတွက် Deduster,ကတ္တရာစေး Bag Filter ကို,နောက်ကျောအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေညင်းတိုက်ခတ်ခြင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး > ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ကတ္တရာစက်ရုံအိတ် filter ကိုဆုံလည်
 ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်ကတ္တရာစက်ရုံအိတ် filter ကိုဆုံလည်
မြေမှုန့်စုဆောင်းကျစ်လစ်သိပ်သည်းဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မားစုဆောင်းခြင်းထိရောက်မှု, အသေးစားခုခံ, အဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေးအဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ ဒါဟာပြာနှင့်ပြာများသန့်ရှင်းရေးမယ့်အစားချုံ့လေကြောင်း system ကိုမှုတ်မြင့်မားသောဖိအားပန်ကာနှင့်အတူ filter ကိုအိတ်အစားထိုးရန်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး, သန့်စင်ခြင်းနှင့်ဒါပေါ်မှာသတ္တုဗေဒအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူစနစ်, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, ဘိလပ်မြေ, သတ္တုများပုံသွန်း, အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သာလွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ကောင်းစွာစျေးကွက်အားဖြင့်လက်ခံရရှိထားပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, အ rotary ပြောင်းပြန်ထိုးနှက်အိတ် filter ကို၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာအောက်ပါအခြေခံယူနစ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
အထက်ပိုင်းအထက်စည်, ထိပ်, ထွက်ပေါက်, guardrail နှင့်ဒေါင်လိုက်လှေကားပါဝင်သည်။
ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတို့ပါဝင်သည်: အလယ်ပိုင်းဆလင်ဒါ, ပန်းကန်, filter ကိုအိတ်နှင့် filter ကိုအိတ်တည်နေရာပန်းကန်။
အဆိုပါအနိမ့်သေတ္တာများပါဝင်သည်: နိမ့်ဆလင်ဒါ, ပြာ Hopper တွေလည်း, manhole, အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ကြယ်ပွင့် discharge ။
1.Shell ဆိုင်ကလုန်းစီးဆင်းမှုပုံစံကိုမြေမှုန့်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ကြောင့်ဒေသခံဆိုင်ကလုန်းတစ်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်။ အကြီးစားမှုန်ဖုန်မှုန့်ဖုန်မှုန့်ကိုထပ်ဖုန်မှုန့် filter ကိုအိတ်အားဖြင့်သန့်ရှင်းသည်ကိုပထမဦးဆုံးနှင့်အသေးငယ်တဲ့အမှုန်မှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း centrifugal အကျိုးသက်ရောက်မှုမှတဆင့်ပျံ့ကျဲနေရပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလယ်တန်းမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေး, အဲဒါကို filter ကိုအိတ်၏ဝန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်အိတ်၏ theservice ဘဝတိုးမြှင့်။
ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖိအားထိုးနှက်ပန်ကာနှင့်အတူပစ္စည်းကိရိယာများမှ 2. စနစ်အခါသမယလေထုအခွအေနေကို အသုံးပြု. ကန့်သတ်မထားဘူးမှုတ်ကိုပြန်မှုတ်။ ဒီထက်အစိတ်အပိုင်းများ, အဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြေးဝတ်ဆင်။ ဒါဟာအယှက်၏ချုံ့လေကြောင်းသွေးခုန်နှုန်းမဲဆောက်သန့်ရှင်းရေး၏အားနည်းချက်အောင်မြင်သော။ ပြောင်းပြန်စီးဆင်းမှု၏အကွာအဝေးကရှည်လျား filte အိတ်ကိုအသုံးနေရာအပြည့်အဝအသုံးချ, အသေးစားတစ်ခုဧရိယာ၏ဧရိယာဖုံးလွှမ်းကြီးမားတဲ့မီးခိုးဓာတ်ငွေ့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်, ကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။
3. ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမြင့်မား filter ကိုဧရိယာညွှန်းကိန်းများတွင် trapezoidal ပြားချပ်ချပ်အိတ်ချမှတ်။ ပြောင်းပြန်မှုတ်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလက်အောက်တွင် trapezoidal ပြားချပ်ချပ်အိတ်အကြီးစားလွှဲခွင်ရှိပြီးတစ်ဦးတည်းသာအချိန် filter ကိုအိတ်၏ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ထိတ်လန့်နှင့်အတူမြေမှုန့်ကိုခါလိုက်နိုင်ပါတယ်။
4. အအေးဒေသအပြင်မှာ filter ကိုပွင့်လင်းသောလေထုထဲတွင်ထားရှိနိုင်ပြီးမြေမှုန့်စုဆောင်းတဲ့အခန်းဆောက်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ကတ္တရာသုံးစက်ရုံအတွက် Deduster , ကတ္တရာစေး Bag Filter ကို , နောက်ကျောအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးလေညင်းတိုက်ခတ်ခြင်း , ကတ္တရာသုံးစက်ရုံ Dedusting Bag , ကတ္တရာသုံးစက်ရုံ၏ burner , ဓာတုစက်ရုံအတွက် Deduster , တုရုမြို့စက်ရုံအဝတ်အိတ် Dedusting , ဘိလပ်မြေစက်ရုံအတွက် filter ကေ့